"प्रतिभाहरू, जहाँ तपाईं आउन? - सानैदेखि। म रचना र केवल आफ्नो मूल देशमा आफ्नो बाल्यकाल मा के पेट भर खिलाना हुनेछ हुन (Valery Gavrilin) बाँच्न "। जीवनी, जो धेरै गाह्रो छ संक्षेप मानिस राम्ररी कला संग जोडिएको थियो। रचनाकार यसको काम मा शहर र क्षेत्र को सबै आध्यात्मिक सौन्दर्य बनाएको छ। डरपोकपन, समस्याका, subtlety, कोमल - रचनाकार को काम मा सबै embodied।
भोलोग्डा आवाज नजिकै जन्म
Valeriy Aleksandrovich Gavrilin शिक्षकहरूको एक परिवार मा 17/08/1939 मा जन्म भएको थियो। रचनाकार को भविष्यको लागि, आफ्नो साथीहरूको थुप्रै लागि जस्तै, एक किंडरगार्टन एक अनिकाल, प्रकोप, orphanhood लागि ल्याएको जो युद्ध थियो। युद्ध बुबा व्लादिमीर गर्न गएका, अगस्त मृत्यु भएको छ Leningrad चालीस-दुई। परिवार गाउँमा Perhureva बस्न सारियो। त्यहाँबाट, त्यो निर्देशक रूपमा काम जहाँ Exaltation, को गाउँमा स्थित थियो जो छोराछोरीको घर, नजिक आमा।
कठिन समय, मेहनत, भोक जाडो चालीस छैटौं वर्ष हार्मोनिका, plangent, दुःखी गीतहरू "जिब्रो अन्तर्गत" नृत्य र pripevki भन्दा संग जाडो जमघट संगठित गर्न गाउँलेहरू हस्तक्षेप गर्दैन। यो सबै Valera स्पन्जले जस्तै अवशोषित। यो 1950 सम्म लामो र त्यसपछि बाल्यकाल अचानक समाप्त भयो। आमा, झूटो आरोप मा पक्राउ बच्चाहरु हेर्न अनुमति छैन, बहिनी Galya चाची लिए र एघार घर केटा भोलोग्डा अनाथालय मा पर्छ।
अनाथालय एक गायक दल, पियानो र सांगीतिक कामदार Tatyana Tomashevskaya हुँदा। न गायक दल वा नृत्य Valery Gavrilin जसको जीवन फरक दिशा मा भयो, मैले सफल भएन। साथै, यो कुरा छैन, त्यो साधन प्ले। तर तपाईं केटा गरेको concertmaster मनोरम हेर्न गर्दा। यो संगीत बनाउन र टिप्पणीहरू लेख्न इच्छा भरिएको थियो।
को Leningrad Conservatory प्रोफेसर इवान Mikhailovich Belozemtsev चयन देखि शहर मा एक पटक आए भेंट बच्चाहरु। जसले संगीत लेख्न प्रयास गरिएको छ केटा, देखाए। प्रोफेसर संगीत पुस्तक वेलेरिया मा प्ले गर्न निर्णय, तर आफ्नो काम देखाउन निर्णय गर्ने भविष्यमा संगीतकार रोकेको थियो। अतिथि Leningrad बस अचम्मको छैन संगीत प्ले गर्न आग्रह गरे। यो क्षण देखि Valery जीवन परिवर्तन भयो।
1953 मा, स्वतन्त्रता हासिल गर्न व्यवस्थित जो आफ्नो आमाको अनुमति, संग, त्यो Leningrad Conservatory मा संगीत स्कूल लगियो। Gavrilin Clarinet शिक्षित थियो। उहाँले पछि संगठन विभाग सारियो। VALERY enthusiastically अध्ययन। उहाँले सबै ज्ञात symphonies र sonatas, सबै नयाँ काम outplayed।
उन्नाइस मा, जवान संगीतकार secession सिद्धान्त तयारी काम को Conservatory प्रवेश गर्छ। वर्ष को एक जोडी अन्तिम रूप दिँदै अघि, अचानक उहाँले विभाग musicology गर्न, र थप गम्भीर लोकगीत रुचि जान्छ। अध्ययन को पाठ्यक्रम मा, Valery Gavrilin expeditions थियो, ग्रामीण जीवन, कण्ठ बोली, रेकर्ड गीतहरू अध्ययन। यात्राको भारी थिए। काम मात्र सुनेपछि तर पनि प्राण, हृदय छैन। युद्धपछिको, भोक गाउँ, महिला hysterical गीतहरू मदत Valery Gavrilin भविष्यमा लोक कला शास्त्रीय संगीत संयोजन। साथै Soloviev-खरानी को काम को बारे मा एक पुस्तक लेखन रूपमा।
संगीत र संकट मा सफलता
को conservatory मा आफ्नो पढाई को अन्तसम्ममा Gavrilin सूट "साङ्गलो", धेरै स्ट्रिङ quartets र "जर्मन पुस्तक" लेखे - रचयिता को संघ मा एक उत्साह पूर्ण स्वागत संग अभिवादन थियो Heine को कविता, मा एउटा गीत चक्र र धेरै वर्ष को लागि प्रदर्शन गर्ने को मुग्ध पार्ने संगीतको को भाग थियो।
Shostakovich को आग्रह मा, Valery स्कूल स्नातक गए। उहाँले बाह्य विद्यार्थी रूपमा परीक्षाहरू पार। "रूसी पुस्तक" उपाधि काम चक्र थियो। 1965 मा, यो काम को Leningrad संगीत प्रदर्शन को दशक को अन्तिम कन्सर्ट एक भारी सफलता थियो। Gavrilina "संगीत बाट Yesenin।" रूपमा चिनिन थाले 1967 मा संगीतकार Glinka को राज्य पुरस्कार कान्छो विजेता भयो।
Gavrilina मा यस्तो आश्चर्यजनक सफलता पछि सुरु एक रचनात्मक संकट। उहाँले सधैं धेरै लेखे, तर उहाँले आफ्नो गायन चक्र सिर्जना जो उच्च रचनात्मक उपलब्धिहरू, पुग्न सक्नुहुन्न। र उहाँले पियानो, सुइट लागि टुक्रा सिर्जना जहाँ छाया, मा केही वर्ष बाहिर छ, चलचित्रहरू र नाटकहरु लागि संगीत लेख्छन्। र केवल सत्तरी-दोस्रो वर्ष मा, त्यो यस्तो ओपेरा "को violinist को कथा Vanyusha 'सिम्फोनिक काम," युद्ध पत्र "र" जर्मन पुस्तक2"को रूपमा केही शक्तिशाली कामहरू लेख्न व्यवस्थित। एक सानो पछि, त्यहाँ अन्य छन् "जर्मन पुस्तक 3," "मा कविता Shulgina" पृथ्वी "र चक्र" पुरानो महिलाहरु को एल्बम बाट "Vecherok।
यी सबै काम मा Gavrilin "गीत-सिम्फनी" भनिन्छ musicologists मध्ये एक छ जो एक नयाँ विधा सिर्जना गर्न, व्यवस्थित। आफ्नो पप-संगीत तिनीहरूले खुसीसाथ गाए र ओपेरा र कोठामा संगीत सेलिब्रेटीहरू प्रदर्शन गर्ने एक उच्च स्तर यस्तो छ।
थिएटर र संगीत
उहाँले थिएटर मा संगीतकार ठूलो योगदान गरे। आफ्नो संगीत धेरै प्रदर्शन र सबै भन्दा महत्वपूर्ण काम प्ले छ Vasily Shukshin को काम को लेखक पढेपछि जन्म "झंकार", बन्न Gavrilina।
Choral काम "द झंकार" साधारण मान्छे को जीवन को एक सांगीतिक तस्वीर छ। पुस्तकमा झंकार यसको विभिन्न manifestations जीवन एक प्रतीक प्रतिनिधित्व गर्छ। मानवता गर्न अलार्म यस प्रकारको - सकारात्मक कामहरू, प्रेम सौन्दर्य सिर्जना गर्न, राम्रो मार्न छैन, डाही छैन।
धेरै सोभियत नागरिकहरु थाह थियो फोटो जो VALERY Gavrilin, को ब्यालेट मा एक भारी सफलता थियो। 1983 मा, "एनी" "सुन पुरस्कार।" प्राप्त तीन वर्ष पछि, उहाँले Teatro सान कार्लो को चरण मा राख्नु भएको थियो।
र त्यहाँ "घाँटी मा अन्ना" फिल्म-ब्यालेट रूपमा राख्न निर्णय गर्ने निर्देशक Aleksandru Belinskomu, यो काम धन्यवाद थियो। प्लट विचार, उहाँले "Waltz" Gavrilina को प्रदर्शन सुने र तिनीहरूलाई द्वारा मोहित थियो, रचनाकार पियानो लघु को एक किसिम एक एकाइ मा ब्यालेट को सांगीतिक साथमा जाने वस्तु को टाउको मा "Waltz" जडान गर्न सुझाव "एनी।" यस ब्यालेट मा Maximova र Vasiliev रूपमा आफ्नो शिल्प यस्तो मालिकको द्वारा प्रदर्शन। त्यसपछि, प्रतिभाशाली मान्छे को रचनात्मक संघ telebalet "रोड हाउस," सिर्जना कामहरू Twardowski आधारमा।
को असी नवौं वर्षमा Gavrilin को ब्यालेट "विवाह Bal'zaminova", पछि फिल्म Belinsky मा embodied थियो जसको लागि अङ्क लेखे।
VALERY Gavrilin, रचनाकार र संगीतकार, स्पष्ट आफ्नो संगीत को दुखद गुण सुन्न जो धेरै ballets, लेखे।
Valery Alexandrovich जीवन को सबै भन्दा Leningrad मा आयोजित थियो, तर यो बाबजुद उहाँले भोलोग्डा आफ्नो जडान अवरोध कहिल्यै। उहाँले आफ्नो पैतृक भूमि धेरै घटनाहरू मा भाग छ।
व्यक्तिगत जीवन Valery Gavrilin को रचनात्मकता रूपमा राम्रो तरिकाले गरियो। 1959 मा, Valery पालुङ्गो घर Natasha स्टेइन्बर्ग विवाह गरे। उहाँले विवाह गर्नु अघि तीन वर्ष मा पहिलो पटक आफ्नो भविष्य पत्नी देखे, Gavrilin तुरुन्तै उनको बिहे भनेर लाग्यो। आफ्नो भाग को लागि, यो थियो पहिलो नजर मा प्रेम। तिनीहरू बीच ठूलो थियो उमेर फरक, उहाँले लगभग चालीस वर्षसम्म बस्ने कोसँग रम्न र Natasha प्रेम पर्नु, तर Valeriy Aleksandrovich चासो गर्न सक्षम थियो।
प्रतिभाशाली मान्छे सधैंभरि बाँच्न सक्दैन, तिनीहरूले वर्ष लागि स्मृति छोडेर टाढा जाने। 1999 मा, जनवरी 28 मा Valery Aleksandrovich Gavrilin भएन। "विरासत Gavrilina" आफ्नो मृत्यु पछि रहनेछ।
Mihail Shufutinsky: जीवनी, रचनात्मकता, व्यक्तिगत जीवन
के Uitni Hyuston मृत: संस्करण र अनुमान
Pepino: घर मा बढ्दै। Pepino Ramesses र Consuelo: खेती र प्रजनन को विशेषताहरु
जलवायु नियन्त्रण: हावा कंडीशनर कसरी? फरक के छ?
पनीर र मशरूम एक स्वादिष्ट सूप कसरी खाना पकाउनु